Kuderera kwakanyanya kwemari panguva yedambudziko re corona kunotungamira ku hyperinflation: bitcoin ndiyo mhinduro here? : Martin Vrijland
Kuderera kwakanyanya kwemari panguva yedambudziko re corona kunotungamira ku hyperinflation: bitcoin ndiyo mhinduro here?
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 13 May 2020	• 21 Comments
"Fiat mari" kana "fiduciary mari" imari inowana kukosha kwayo kubva pazvinhu zvakagadzirwa kubva (segoridhe nesirivheri), asi kubva mukuvimba kuti inogona kushandiswa kutenga zvinhu nemasevhisi. Iko kukosha iko hakuna kubva pane imwe huremu uye zvemukati yesimbi yakakosha, asi pane chivimbo chekuti vashandi vehupfumi vanoisa mukukosha kwemari.
Kwawakange uine goridhe kana sirivheri mari kare, kukosha ikoko kwakabatana nekukurumidza uye yakawanda sei goridhe kana sirivheri yaigona kuve yakacherwa. Nekutanga kwemari yemapepa, muchina wekudhinda unogona kuvhurwa. Ne 'nhamba pane komputa' mari, iyo OPEC dhora dhizaini uye chinongedzo chekugadzirwa kwemafuta chaifanira kupa chekufukidzira. Yese miitiro yakakandwa pamusoro pegungwa panguva yedambudziko.
Mabhangi epakati anodhinda mari isina muganho. Vanoita izvi nekuti kudikanwa kwemari kuri kuwedzera. Chii chimwe chaungaite iwe, sehurumende, kupa zvese izvo mapaketi ekubatsira aunochengetera vanhu iwo huwandu kuitira kuti vararame?
Nei kuvharirwa mari kuchikosha?
Paunenge uchinge uchinge uine sirivheri uye goridhe mari, kudikanwa kwemari iyoyo kwakawedzera vanhu vachiwedzera uye sekutengeserana kuchikwira. Izvi zvinoreva kuti iwe waifanira kuve uine mamwe mari kuti uhaye. Ini ndinotenga chigadzirwa chako uye mukudzoka ndinokupa huwandu hwemari yegoridhe ine imwe kukosha. Unogona kutenga zvaunoda kubva kune iwo emari endarama.
Nekuti iwe waiziva panguva iyoyo kuti yaive basa-rakakura maitiro kuti abvise sirivheri kana goridhe kubva pasi, iwe zvakare waiziva kuti imwe mari yaizowedzerwa, asi kuti kuda kwemari yakawanda hazvireve kuti mari iyoyo yaizoerekana yaonekwa mukati mevhiki. yakanga yakadzikira muutengo. Mushure mezvose, zvakatora nguva uye kushanda nesimba kuti ibvise iyo ivhu kubva pasi uye iinyunguduke mumari yemari. Saka iwe unogona kuchengetedza zvakachengeteka mari yako kwechinguva kutenga chimwe chinhu vhiki rinotevera, usingatyi kuti mari yegoridhe yaikosha hafu yakaringana.
Mari iya inorema payakatsiviwa nemari yemapepa, zvakava nyore. Pepa riri nyore kudhinda. Nezve izvo, mabhangi epakati aifanira kungovhura michina yekudhinda. Izvo zvichiri kutora nguva uye kushanda nesimba, asi zvatova nyore. Iri pepa rakabatanidzwa nemugodhi wegoridhe. Ndiwo wakava muyero wegoridhe. Semuenzaniso, kudhindwa kwemari kwakaramba kwakabatana nekumhanya uko maini egoridhe aigona kugadzira goridhe, saka iwe wakadzivirira kudzikira kwekukurumidza kukosha.
Sezvo kudikanwa kwemari kuchikwira sezvo huwandu hwenyika nekutengeserana zvaikura, uyu mwero wegoridhe wakasiiwa pane imwe nguva. Ndiyo nzira iyo OPEC yakavambwa. Iri sangano remafuta raifanira kubatanidza kugadzirwa kwemari uye kugadzirwa kwemafuta. Saka zvibvumirano zvepasi rese zvakaitwa pamusoro pehuwandu hwebhari yemafuta iyo inogona kugadzirwa nenyika. Dhora racho raive rakabatanidzwa nekugadzirwa kwemafuta, saka kana iwe waida kupurinda madhora, iwe unogona kungoita izvo zvichienderana nehuwandu hwemafuta hwakaputirwa.
Iwo chiyero cheoiri chakave zvakare kubva kubvira chasunungurwa uye ikozvino hapasisina chekubika. Panguva ino, mabhangi epakati ari kugadzira 'fiat mari'. Izvi zvinoreva kuti havana zvirambidzo chero kudhinda mari uye nekuti hapana chitsidzo chekuti izvi zvinoenderana nekumhanya uko goridhe kana mafuta angabviswa muvhu, kudzikisira kwemari hakuna kudziviswa. Unogona kuona kuderera kwemari mukati mevhiki 1.
Zvinorevei zvisina kuchengetedzwa fiat mari zvinoreva mukuita?
Mukuita, izvi zvinoreva kuti mari inokurumidza kuora. Mazana emabhirioni emadhora nemadhora akadhindwa panguva yeKutambudzika. Izvi zvinoreva kuti iwo madhora nemauro anongokosha mashoma. Nekufamba kwenguva, izvi zvinokanganisa mitengo mumitoro.
Iye zvino mabhanga epakati auya nematanho ekuda kusiira mari. Semuenzaniso, kana iwe sekambani yemarudzi akawanda mukweretesa mari kubhanga rakakura, iro bhanga guru rakakwereta mari iyoyo kubhanga repakati. Iwo mabhangi epakati anobva adhinda kunyange imwe mari (saka, hainyatsoiprinta, vanowedzera huwandu mumakomputa yavo) kuti vatengezve chikwereti (zvisungo, humbowo hwechikwereti) kubva kune ayo emarudzi mazhinji.
Saka ngatitii kambani ine zvikwereti zvemamiriyoni zana. Kana ECB ikozvino ichitenga zvikwereti kubva kukambani iyoyo, ipapo kambani iyoyo yakagamuchira mamirioni zana emahara. Iyo kambani inogona kutenga kudzosera yayo zvikamu kubva pamari kana kutenga pamusoro inodonha vakwikwidzi.
Nenzira iyi iwe unoona kuti masasi anofunga kuti hupfumi hwenyika huchiri mune hwakanaka. Mukuita, zvakadaro, iwe wakakurumidza kukonzera mamirioni zana mukuderera kwemari. Iye zvino mamirioni mazana kubva pamazana mashoma emabhirioni angori chikamu chidiki, saka kana iwe ukaita kuti gomo rechikwereti rakakwira zvakakwana, mhedzisiro yekudonha inoita senge inoderera muzana mazwi. Naizvozvo mabhengi epakati anoratidzika sekutenda kuti kumusoro kwavanogadzira gomo, zvidiki izvo devaluation athari senti.
Ndozvatinoona muUS izvozvi, uye ndozvatinoona muEurope futi. Gomo rezvikwereti rakakwiridzwa kwazvo. Nekudaro, nyanzvi dzese dzemari pasi rese dzinobvumirana kuti kudzikira kwemari kukuru kuri kuvanda.
Enzanisa izvozvo nemari iyoyo. Mari iya yegoridhe yawakawana svondo rapfuura pawaitengesa bhegi rembatatisi yakakosha senge vhiki ino, nekuti goridhe harigone kuchimbidzwa nekukurumidza. Nekudaro, iyo euro iri muaccount yako yebhangi iri kukurumidza kurasikirwa kukosha nekuti mari yakawanda inodhindwa nekukasira zvekuti kukosha kwacho kunokurumidza.
Bitcoin seyero yegoridhe nyowani
Iye asingazivikanwe mugadziri we bitcoin akauya nemhinduro yakangwara kwazvo inoyeuchidza nezve goridhe yemigodhi.
Isu tinofanirwa kuve nekufungidzira nezve mari yemari yakadaro, nekuti inopa mukana wekuita kuti zvese zvinoshandiswa zviteedzane. Zvakare chokwadi icho Microsoft muna 2019 patent 2020-060606 yakasvitswa chiratidzo chekuti cryptocurrency inogona kubatana ne 'internet yezvinhu'; matiri isu pachedu tinogona kuva chimwe chezvinhu izvo.
Asi isu tatova munguva yenguva yekutevera mari yedhijitari. Mushure mezvose, imari iyo iwe yaunokwanisa kuwana kuburikidza neapp yako kana kadhi rebhangi. Nekuuya kuri kubviswa kwemari yemapepa, isu tatova mutsetse wedhijitari yewebhu. Dambudziko rekuwedzera nemari iyo, panguva yacho, nderekuti iri zvakare kugadzira kukurumidza kukuru.
Satoshi Nakamoto ndiye pseudonym wemunhu asingazivikanwe kana boka rakagadzira iyo crypto mari Bitcoin uye yakatanga yekutanga blockchain database. Tinogona kushamisika kana iripo yemari system system isiri kungorongerwa kutifambisa takananga bitcoin seyero nyowani. Nezvo iwe unganetseka kana Satoshi Nakamoto asiriwo chete kubva kune rimwechete rakaenzana boka reboka.
Nekudaro, iyo bitcoin system ine huchenjeri hwakanyanya kubata uye hwakavakirwa pachishandiswa mutemo wekuchera goridhe Kuti titengese huwandu hwe bitcoin, bitcoins inofanira kucherwa. Izvo hazvigoneke ne spatulas nefoshoro muvhu, senge ndarama, asi izvo nemakombiyuta akawanda anomhanyisa ane mutengo wekutenga wakakwira uye unopedza mafuta akawanda (simba). Izvi zvinoverengera kuti havasi vese vanogona kungogadzira bitcoins.
Maitiro ekugadzira bitcoins anonzi "mugodhi", unonyatsoyeuchidza goridhe remigodhi kubva kumugodhi. Maitiro emigodhi aya anoreva kuti makomputa anofanirwa kugadzirisa formula yemasvomhu iyo yakaoma kunzwisisa zvekuti zvinogona kutora mazuva kuti uwane mhinduro. Nekudaro, kuoma kwefomula inowedzera sezvo paine mamwe makomputa kunetiweki. Vanhu vazhinji pavanotanga kuchera migodhi, zvinonyanya kuoma kuverenga mhinduro.
Nguva imwe neimwe yakadaro kombiyuta yakagadzirisa formula, 1 bitcoin inogadzirwa. Sekutenda nekuda kwekuverenga uku, mugodhi anowana chikamu cheiyo bitcoin semubairo.
Kuti uwedzere kuomesa mutambo, mubairo unotemwa nepakati mumakore mana ega ega. Kuoraurisa kwakadaro kwakaitika nemukana vhiki rino. Musi waMay 12 uve chaiwo. Saka kana iwe wakakwanisa mine mine 12 bitcoin pamberi paMay 1, iwe wakawana x% iyo. Mushure meMay 12, huwandu ihwo hwakatemwa nepakati. Izvi zvinoreva kuti vamwe vashandi vemugodhi havakwanise kutenga "spatulas" uye "mafoshoro" matsva kuti vaite basa ravo rekuchera. Ivo havachakwanise kubhadhara mabhiri emagetsi kana kuti havachagona kutenga makomputa anomhanyisa kune angu. Vanowira pamusoro.
Kana iwe ukazvinzwa nenzira iyoyo, iwe unogona pakarepo kufunga kuti: Izvo zvinotungamira kune monopolization. Izvi zvinoreva kuti makambani akapfuma anozova zvakare makuru mairi uye nekukurumidza iwe uchave nepakati wepakati apo izvo zvese zvemigodhi zvinoitika. Iyo nyaya ndeye, zvisinei, kuti nekurasikirwa kwehuwandu hwemakomputa mu network, iyo yekuverenga formula inoderedzawo zvakaenzana. Izvi zvobva zvasimudzira vapfuuri vatsva kutora spatulas uye kutanga mafoshoro.
Nekudaro iwe unotendeuka kana kuishandura, iwe uchaona zvakare kuwedzera kwehuwandu pano uye kune njodzi.
Zvakangodaro, vagari vemari vakawandisa vanofarira musimboti yekushanda kwe bitcoin, chaizvo nekuda kweichi chiitiko chekuchera migodhi. Mushure mezvose, zvinoyeuchidza nezvekunetseka kwaunobvisa goridhe kubva pasi uye saka yakafanana neaya emari endarama enguva yakapfuura uye chokwadi chakabatana 'chebhureki pakuderera'. Ndokusaka iwe uchiona kuti ikozvino kune mazana emazana emabhiriyoni mukutengesa bitcoin.
Saka Bitcoin ine mukana wekugadzira iyo goridhe idzva chiyero. Zvingaite, sekunge, kupa kuti kubhuroka kwemari kudzikiswa kwatisingakwanise neyezvino fiat system.
Batanidza mari kune bitcoin
Mukudanwa kwehutongi hwakananga ini zuro rakabudiswa, Ndakataura zvekubatanidza mari kune bitcoin se "goridhe chiyero". Iwe unogona kutaura kuti mari inofanira kubatanidzwa kune chimwe chinhu. Iwe unogona zvakare kudzokera kune chaiyo goridhe rekuyera seyakakora, asi ipapo iwe unofanirwa kuramba uchichera goridhe kunze kwevhu uye izvo hazvina kunyatsoenderana nharaunda. Makomputa-ane nzara emakompiyuta zvakare haana kunaka kune zvakatipoteredza, asi isu tinoona hunowanda, tekinoroji irikusimuka, iyo inogona kugadzira magetsi zvakanyanya nharaunda uye nekudaro iwe unogona kutaura kuti chisarudzo chinofanirwa kunge chiri che "bitcoin standard" yegoridhe.
Zviri pachena kuti panofanira kuve nemhando ye "goridhe standard" zvakare. Zvikasadaro isu tichafanira kubata ne hyper yemari yakadzikira. Izvi ndizvo chaizvo zviri kuitika panguva yeKorona dambudziko. Kumisikidza kune chiyero chitsva chegoridhe saka chinofanira kuperekedzwa ne reset mupiramidhi remagetsi. Iko iko zvino mitsara inokwira kumusoro uye yakawanda uye yakawanda simba kuenda kune diki rakapfuma boka, simba rinofanira kuuya riri mumaoko revanhu.
Kudzorera simba kune vanhu zvechokwadi kungave kwakaitika chiitiko. Izvo hazvina kumboitika munhoroondo. Asi tekinoroji imwecheteyo iyo yakavakirwa bitcoin, iyo inonzi blockchain, inopa mukana wekupa vanhu simba rekuita sarudzo. Iwe haufanire kuwedzeredza mamiriro ese enharaunda, asi iwe unofanirwa kuchinja manejimendi.
Semuenzaniso, unogona kuve nemashumiro anotungamirwa nevashumiri vakadomwa nevanhu uye vanopa humbowo kuvanhu. Panzvimbo yekupika kutendeka kune korona, ivo ikozvino vanopika kuvimbika kune vanhu. Izvi zvinofanirawo kushanda kune iyo yese sevashandi vehurumende uye zvese zvirevo zvinopika zvino kutendeka kuchigaro (vatongi, magweta, mapurisa, vaongorori, vashandisi, nezvimwewo).
Chokwadi haugone kutaurira zvese nekuzvizivisa kuvanhu, saka danho rekureruka rinofanira kuitika. Mubvunzo ndewekuti masasi anogona kukurudzirwa here kumukira kwakadaro kana kuti isu tichazombomirazve kusvika tagutsikana nemumwe weabhirioni saElon Musk naBill Gates, kwatinomhanya nenjodzi yekuti chinongedzo necha blockchain chichaenda pamwe kubatanidza uropi hwedu neiyo system kana kubatanidza system yakadaro nechitupa chekudzivirira.
Kana paine mukana wekutanga shanduko, izvozvi zvavapo. Hatifanire kupotsa iwo mukana. Nekudaro, nekuda kweizvozvo isu tinofanirwa kusimuka pachedu.
Kana tichida shanduko tinogona kuita zvinhu zviviri. Kana isu tinomirira kudzamara dambudziko re fiat rakakura zvakanyanya uye inflation ichirova zvakaipisisa zvekuti iyo yakafanana bulwark yemagetsi inotipa iyo "goridhe" idzva semhinduro. Kana isu tinozvitakura.
Takamirira kuti inflation ive yakakwira zvakanyanya uye kuti isu tive mune yehutongi hwakawanda hwehutongi hwepiramidhi remagetsi zvekuti hapana kudzokera kumashure? Ipapo isu tine vimbiso yekutonga kwehunyanzvi. Ndokureva, isu tichave takabatana munzira dzose kune hurongwa hunoshandisa tekinoroji kutiita isu varanda vejitadhi.
Kana tikasarudza kutora iro reins isu, tinogona kuisa mabhureki uye tichiri kubatsirwa nerutivi runobatsira rwekuvandudza kwetekinoroji. Ipapo tinogona kuisa mabhureki pane yakasununguka kukura kweAI uye tinogona kuisa mabhureki pane centralization yesimba.
Mubvunzo ndewakuti, kuti mukana uno uripo wakakwana here kukurudzira. Mubvunzo ndewekuti mukana wekuti kune mwenje wakakwana kukurudzira mazana ezviuru zvevanhu.
Ndipo panotangira kurwara kwepfungwa kwevanhu, ndipo ndipo panouya dambudziko rekuchinja chaiko kwepfungwa dzevakawanda. Chero zvazviri, ndinoda kukwanisa kuzvitarisa mugirazi uye ndizive kuti ndakaita zvandagona. Mukana uripo, mikana iripo. Isu tinongofanira kuitora tozviita. Izvo hazvidi pitchforks uye mabhora. Izvo zvinongotora shanduko mune yako mindset.
Nenzvimbo yekuvhota yakananga online, tinokwanisa kuisa vatungamiriri vatsva vanotaurira vanhu, kuita kuti mitemo ijekeseke uye kuve nyore, kudzimisa iyo fiat mari system nekubatanidza mari nyowani kune bitcoin. Tinogona kuidzima sekusanzwisisika kana isu tinogona kurova kupinda uye kurega chikumbiro ichi chiine hutachiona. Uri kutora chikamu here?
Vhidhiyo Plandemic Dr. Judy Mikovits ndeye Chiitiko 201 mhando yemanyepo enhau musungo (vhidhiyo)
Kurwisa kukuru pawebsite Martin Vrijland, asi isu tichapfuurira!
Kuzorora kwekorona ndiko kwakaipisisa pamhino dzako: kunyepa kuti rusununguko rwava pedyo
Kudana vanhu vese: mupanduki! Enforcers: Mira Iwe Unhu Husina Tsika Tsika Maitiro!
Nguva yekuchinja kukuru uye huru shanduko: saina chikumbiro
Tags: bitcoin, corona dambudziko, dhora, Euro, Featured, fiat, raha, money system, goridhe chiyero, halving, halving, inflation, mafuta, kuderera, OPEC, Dzokerazve, revolution, Satoshi Nakamoto, chitupa chekudzivirira
13 May 2020 pa 11: 31
Tsvaga uone kuti nei bitcoin migodhi nheyo ichiita kunge yakasimba kwazvo:
Benzo Wakker akanyora kuti:
13 May 2020 pa 12: 14
Kukumbira kusaina, kwakashata pane vanhu vashoma vakaita izvi.
13 May 2020 pa 13: 46
Zvinoitika mune tsika vanhu vanofarira kunyunyuta uye kuda kunzwa kuti chii chiri kunetsa, asi havadi kuita kuedza kutanga shanduko. Kufamba uchienda kubhoti rekuvhota makore mana ega ega uye nekuisa muchinjiro kunonakidza zvakakwana, rega uite kuzvisimbisa kuti unyatsoita chero chinhu - kunyangwe muchiitiko ichi, izvo hazvisi zvinopfuura kusaina chikumbiro kune kuwana kufamba kuri kuenda.
Saka vanhu havatendi shanduko uye sezviri pachena vanosarudza kurega icho chiri pamusoro pavo. Vanhu vazhinji vanoti vakamuka hapana chavanoita.
Kubva 'nebhegi remachipisi mumaoko' kuenda kuDWDD, kuenda 'nebhegi remachipisi' achitarisa kuna Jensen ndiko chete kuchinja kunoonekwa that
13 May 2020 pa 14: 17
Ehe, kushora zvimwe kana kuona zvinhu sezvazviri pandiri. Ini handitarisire chero chinhu kubva kuvaranda. Ivo zvirokwazvo havadi shanduko imwe mari chete. Varanda vakanaka pavaranda. Runyararo rwaive narwo apo varanda vasina kuenda kumugwagwa nekuda kwekutya 'corona'. Ini ndiri kupotsa zororo rese izvozvi, asi iye haana hanya nezvetsika uye ndizvo chaizvo. Madurodam haisi nyika yekushandura uye yekumukira. Ndiwo maitiro evaranda uye wevatengesi mafungiro pano.
Varanda vachiri vakangofanana, zvakanakira kuve muranda uri kunze kwezvakaipa. Zvakare, usakanganwa udyire uye kutsamwa kwevaranda.
Martin, uri gamba, iwe unoedza nepaunogona napo kukweva bhiza rakafa ..
SandinG akanyora kuti:
13 May 2020 pa 15: 30
Changu chandinoziva ndechekuti kune zvimwe zvekurovedza muviri muhomwe yematatisi.
13 May 2020 pa 15: 40
Mbatatisi ane hunhu hunhu hwahunomera iwo hunomera chahwo. Kana iwe ukaisa iyo bhegi yematatisi muvhu, iwe une ngoro yakazara izere mbatatisi mashoma vhiki anotevera. Ndinofunga iwe unofanirwa kunge uine hutano pamusoro pehombodo yematatisi. Bhiza rakafa inyaya yakasiyana 😉
13 May 2020 pa 15: 54
chaizvo pfungwa yangu, kukudzwa hapana chakaipa ne…
13 May 2020 pa 16: 12
Bhiza rakafa imwe nyaya. Kukumbira ruregerero kana ndikasangana nezvakawandisa.
13 May 2020 pa 17: 18
Zvinonzwisisika zvakakwana. Kutenda nekuonga kwako nenzira.
Ndinofanira kubvuma kuti ndiri kushushikana kwazvo nekuwanikwa kwekuti pane kushoma kufamba muvanhu, asi zvakadaro ndichaenderera mberi netariro yekuti kuchave nenzvimbo inosimudzira.
Ini ndinoshamiswa kuti vanhu havatombonetsekana nekuzadza chikumbiro nekudzvanya bhatani. Ndiwo chete masekondi 30 ebasa. Kusatenda kana kutya kwakakura here? Kunyangwe kune ese zviuru zvevateveri pazuva? Kana iko kungori tchipisi uye varaidzo yedoro.
13 May 2020 pa 17: 28
Vashoma vanonzwisisa zvinorehwa nemamiriro ezvinhu epano. Kuona kubatana uye mhedzisiro yezviito zvimwe kuchiri kuda imwe EQ / IQ uye ini handisi kungotaura nezvevaranda vakasarudzika vane 'zita' pamberi pezita.
Kuona Helikopta saka chinhu chinodiwa, kubvisa mabhurawuti hakusi nyore. Saka handisi kutaura nezve mapofu enyama 😉
13 May 2020 pa 17: 56
Ini ndinofunga vazhinji havadi kuburitsa zita ravo uye kero zvadzo. Kutya kwavanoshandira, 'basa', kuchengetedzwa kwebasa AIVD nezvimwewo rombo rakanaka isu tinogara mune bumbiro. Kukosora. Magamba pamasokisi. Mushure mezvose, hakufanirwe kuve nengozi yevaranda. Fungidzira.
13 May 2020 pa 18: 00
Ini ndaimbove ne “shamwari” (waizivikanwa) uyo aisashanda pamba kwemakore. Iyo nyanzvi. Rutivi rwakakosha: kubatanidza uye kusefa data kubva kune dheti.
Pane imwe nguva akakwanisa kudzoka kubasa mushure mekosi yekuzorodza.
Tsananguro yemufananidzo: mukadzi uye asina vana ane imba inotengeswa.
Pandakamubvunza kuti zvaive nani - neruzivo rwese rwaanarwo rwekuti hurumende dzinoshura sei vanhu - kuti vagare mumupendero wemoor pane kutora basa rinobatsira kuvaka iro mukoma mukuru (hombe data anoongorora) system, yaive mhinduro yake: "Zvakanaka kuti ini ndinogona kuchinja kubva mukati. Uye ndakapotsa ndarasikirwa imba yangu. Iye zvino ndinogona kungogara pano uye kuramba ndichityaira mota yangu ”.
Shanduko iyoyo kubva mukati haisati yaonekwa 😉
Varipi varikupi? Ivo vari mudzimba dzavo uye vanogona kuramba vachityaira mota yavo.
SalmonInClick akanyora kuti:
13 May 2020 pa 18: 23
Hausi uyu muenzaniso wakanaka here wemumwe munhu asingaoni uye asinga zive kuti ari kuvaka mbariro dzetirongo yaanozvivharira manhamba?
13 May 2020 pa 15: 41
Iko kuGermany neFrance iyo Kampfgeist ichiri mupenyu, Madurodam ndeye chaiyo uye nenzira yekumira. Neshoko rekuti Resistance mumwe anofunga zvekutsauka ..
13 May 2020 pa 15: 44
Pfeka mask yako kana uchienda panze 😷
13 May 2020 pa 15: 42
Makubvu achaputika, uye austerity ichatevera
mec akanyora kuti:
13 May 2020 pa 17: 48
Icho chinorwara chinosara munyika chine simba pamusoro pedu chine dambudziko rakakura kana iwe ukakanda yako smartphone kure kana kumira kushandisa icho chinhu, ivo vanorasikirwa neNOO kutonga pamusoro pako. Pasina shit-dhongi muhomwe yako yekufonera, havazokwanise kukutarisa iwe 24/7 uye yavo yemadhijitari bubble mari iri panjodzi kwavari kusundira munhu wese.
Saka imbomira izvo zvejunkie muropa maitiro pane yako smartphone
Shoe Lace akanyora kuti:
14 May 2020 pa 08: 00
Kwandiri, hapana foni ichave yakagurwa kunze
13 May 2020 pa 18: 10
Chikamu che Corona chinotyisidzira kuti chinofanirwa kudzoreredzwa: 'Chikanganiso chikuru'
Zvakanaka ndinofunga ichi hachisi chikanganiso chikuru, asi inokodzera chaizvo mubilderberg ajenda yekuparadza iyo yepakati kirasi uye kuendesa kuhurumende, saka more mitarbeiters.
Kubva 33:10 Rutte: “Ndinotenda mune yakasimba. Nyika ino inoda nyika yakasimba. " 34: 23 "Isu inyika inoshamwaridzana kwazvo parumananzombe."
akajairwa kufungidzira Stiglitz anoburitswa kunze kwechigadziro kutsanangura zvinhu zvishoma, saka zvakanyanya centralization. Zvemagariro ndiyewo musuwo wekuti (tekinoroji) Komunizimu Iwe wakanyeverwa!
Marcos akanyora kuti:
13 May 2020 pa 23: 57
kutanga sei kufamba https://www.youtube.com/watch?v=V74AxCqOTvg&t=81s
Future akanyora kuti:
14 May 2020 pa 11: 56
Izvo zviri kuenda nekukurumidza kwazvo izvozvi. Iyo prototype yeMac itsva. Kusanganisira izvo zvaunofanirwa kuita, izvo iwe zvaunofanirwa kubata kuti uite (verenga munhu wese ane maoko avo pane iro bhodhi reodha, kukanganisa) funga kuseka uye kwauri, uye maitiro ako. Pasi pekuona-uye-ese-anombundira-ziso-rimwe chiratidzo. Izvo zvakare ziso rimwe, ziso rakaverenga AI. Echokwadi akavanzwa sehadzi.
« Nguva yekuchinja kukuru uye huru shanduko: saina chikumbiro
Iwe unofanirwa kutora kana kuramba iyo Covid-19 yekudzivirira kana ikave yekumanikidza? Kuitei? »
Kushanya kwakazara: 2.419.594
Maurice de Hond anowana imwe nehafu yemamita kutonga nonsense (vhidhiyo)
Vangani vanhu veDutch vangatokwanisa kubhadhara mabhiri avo panguva yeiyo corona dambudziko?
Iwe haugone kupinda muchitoro kana iwe ukasapa zita rako nehuwandu hwevaranda panzvimbo yekubatirana uye izvo zvinongova kutanga
Kuomesa kwaTrump kuenda kuChina ndiko kutanga kwekudonha kwedhora nekudonha kwehupfumi?
Direct demokrasi nzira yakapfupika kubva kuvharika nekudzoreredza hupfumi
Camera 2 op Maurice de Hond anowana imwe nehafu yemamita kutonga nonsense (vhidhiyo)
ongorora op Vangani vanhu veDutch vangatokwanisa kubhadhara mabhiri avo panguva yeiyo corona dambudziko?
Riffian op Iwe unofanirwa kutora kana kuramba iyo Covid-19 yekudzivirira kana ikave yekumanikidza? Kuitei?
Sunshine op Maurice de Hond anowana imwe nehafu yemamita kutonga nonsense (vhidhiyo)
Sei uchida kuziva izvi? op Maurice de Hond anowana imwe nehafu yemamita kutonga nonsense (vhidhiyo)